पूर्वराजदूत केशवराज झा हत्याका ४ अनौठा तथ्य
भदौ ६, २०७५| प्रकाशित १७:५९
काठमाडौं– पूर्वराजदूत केशवराज झाको किचनमा हरेक दिन बिहान ६ बजे चिया पाक्थ्यो। पालेको काम गर्ने कान्छाराम तामाङले पकाउँथे। झा दम्पती र तामाङ सँगै चिया पिउँथे। यो बिहान ६ बजेको नियमित दैनिकी थियो।
सोमबार बिहान पनि बाहिरतर्फको भर्‍याङबाट तामाङ किचनमा गए। चिया तयार भयो। तर, झा किचनमा उक्लिएनन्।
उनकी श्रीमती बोलाउन तल झरिन्। रगतमा लतपतिएको अवस्थामा श्रीमान्‌लाई देखेपछि उनले तामाङलाई बोलाइन्। त्यसपछि आफन्तलाई।
उनलाई लाग्यो– श्रीमानले आत्महत्या गरे। आफन्तहरुलाई पनि त्यही भन्दै जानकारी गराइन्। आफन्तहरु घरमा आए।
बिहान करिब ८ बजे प्रहरीको कन्ट्रोल १०० मा झाले आत्महत्या गरेको भन्दै सूचना आयो। सुरुमा महानगरीय प्रहरी वृत्त सिंहदरबाले घटनाको अनुसन्धान अघि बढायो। घटनास्थलमा पुग्दा आत्महत्या होइन हत्या जस्तो अवस्था देखिन्थ्यो। त्यसपछि प्रहरीका उच्च अधिकारी तथा अनुसन्धान अधिकृतहरु घटनास्थलमा पुगे।
घटनास्थल हेर्दा उनको हत्या नै भएको प्रारम्भिक निष्कर्षमा प्रहरीहरु पुगे। प्रहार गरिएको चक्कु घाँटीमै थियो। टाउको र अनुहार रगतमा लतपतिएको थियो। उनी उत्तानो अवस्थामा थिए।
सिरकको एक भाग रगतमा भिजेको थियो।
प्रहरीले ‘हाई प्रोफाइल मर्डर’को अनुमान गरेर फरेन्सिकका चिकित्सक तथा तालिमप्राप्त कुकुरलाई झिकाएर अनुसन्धान अघि बढायो। कामदार तामाङ तथा घरमा बिहान बिहान आउने २ मालीलाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान सुरु गर्‍यो। लगातार तीन दिन उनीहरुमाथि अनुसन्धान गर्दा पनि प्रहरीले शंका गर्ने ठाउँ भेटेको छैन।
बबरमहलको ओलम्पिया स्कुलसँगै जोडिएको छ, झा दम्पतीको पुरानो घर। ठूलो कम्पाउन्ड भएको त्यो घर कतिपय स्थानीयका लागि रहस्यमय लाग्थ्यो। राजधानीको केन्द्रमा रहेको घरमा चहलपहल हुँदैन थियो। घरका मान्छेहरु छिमेकीहरुसँग पनि त्यति घुलमिल थिएनन्।
छिमेकी मात्र होइन श्रीमतीका आफन्तहरुसँग पनि खासै घुलमिल नहुने स्वभाव थियो झाको। कोही पाहुना आएमा पूरै घर पखाल्ने गर्थिन्। घरमा बाहिरी मान्छे आएको उनलाई मन पर्दैन थियो।
त्यही एकान्त घरभित्र आइतबार झाको रहस्यमय हत्या भयो। यो घटना काठमाडौंका थोरै रहस्यमय केसमध्ये एक भएको प्रहरी अधिकारीहरु बताउँछन्।
८० वर्षको उमेरमा पनि झा सक्रिय जीवन जिइरहेका थिए। शनिबार मात्र एक कार्यक्रममा गएर भाषण गरेका थिए। उनी आफैं गाडी चलाउँथे।
आयरल्यान्ड बस्ने छोराछोरीलाई बिदाइ गर्न शनिबार विमानस्थल गएका थिए उनी। केही दिनअघि छोराबुहारीले २५औं ‘म्यारिज एनिभर्सरी’को भव्य पार्टी दिएका थिए। एक छोरी राष्ट्रसंघीय निकायमा विदेशमा कार्यरत छिन्।
अवशकाप्राप्त जीवन उनी खुसीसाथ जिइरहेका थिए। केही दिनअघि मात्र आफूसँग उनले नेपालमा हुन गइहरकोे बिमस्टेक सम्मेलनका बारेमा छलफल गरेको नेपाल प्रहरीका पूर्व आइजिपी खड्गजित बराल बताउँछन्।
हत्याको उदेश्य के?
कुनै पनि हत्यामा मुख्यगरी तीन कारण हुन्छन्, पैसा, रिसिइवी र आवेग।
हत्या योजनाबद्ध भएकाले आवेगमा भएको हुन सक्ने सम्भावना न्यून छ। झाको कोहीसँग रिसइवी नभएको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा देखिन्छ। झा दम्पती प्राय: एकान्तमा रमाउँथे। कसैसँग दुस्मनी नगर्ने उनीहरुको स्वभाव थियो। दुस्मनी पनि नहुनु र घरमा केही चोरी पनि नहुनुले हत्या रहस्यको चक्रव्यूहमा फसेको हो। उनीहरुले केही समयअघि मात्र बूढानीलकण्ठ क्षेत्रको जग्गा बिक्री गरेको बुझिएको छ। त्यही विषयसँग हत्याको सम्बन्ध रहेको आशंका पनि गरिएको छ। कोही लुटपाटका लागि घरभित्र छिरेको र झाको हत्यापछि केही नलिएर भागेको हुन सक्ने पनि प्रहरी आशंका छ।
घटनाको प्रकृति हेर्दा घरबारे जानकारी भएको व्यक्ति संलग्न रहेको प्रहरी आशंका छ।
अनुसन्धान गरिरहेका महानगरीय अपराध महाशाखाका प्रमुख धीरजप्रताप सिंह भने अनुसन्धानमा रहस्य खुल्ने दाबी गर्छन्।
घटनाको ‘मोडस अपेरान्डी’का आधारमा अहिलेसम्ममा यो उपत्यकामा भएको रहस्यमय हत्या भएको अनुसन्धानमा आबद्ध प्रहरी अधिकारीहरु बताउँछन्। तर, तथ्य फेला पार्नेबित्तिकै रहस्य खुल्न धेरै समय नलाग्ने उनीहरुको विश्वास छ।
झा हत्याका ४ अनौठा तथ्य
१.घरभित्र कसरी छिरे हत्यारा?
झाको घरमा दुई वटा गेट छन्। पश्चिमतर्फको ढोका खुल्ने गरेको छ भने पूर्वतर्फको सधैं बन्द। आइतबार बेलुका पश्चिमको पनि बन्द थियो। घरमा प्रवेश गर्ने अर्काे ढोका भनेको छतको हो। त्यो पनि बन्द थियो।
त्यो अवस्थामा हत्यारा कसरी घरभित्र प्रवेश गरे?
पहिलो तलामा रहेको झ्यालबाट जाली काटिएको प्रहरीको आशंका छ। पहिलो तलामा झाकी श्रीमती सुन्ते कोठाको जाली काटिएको थियो। त्यहीबाट हत्यारा प्रवेश गरेको आँकलन छ। तर, काटिएको जालीमा खिया रहेकाले त्यहीबाट प्रवेश गरे भन्न गाह्रो रहेको अनुसन्धानमा आबद्ध एक प्रहरी अधिकारी बताउँछन्।
तर, झ्यालमै रहेको बेडमा उनकी श्रीमती सुतेकी थिइन्। त्यहाँबाट प्रवेश गर्दा पनि उनले थाहा नपाउनु अनौठो छ।
अर्काे आश्चर्य भनेको उनीहरु कसरी झ्यालमा पुगे भन्ने हो। जहाँ भर्‍याङ नलगाईकन जान सकिँदैन। तर, भर्‍याङ लगाएको कुनै संकेत देखिन्न। भित्ताको एक ठाउँमा नांगो खुट्टाको डाम मात्र देखिन्छ।
अहिलेसम्मको प्रहरी अनुसन्धानको रिपोर्टअनुसार उनीहरु घरसँगै रहेको आँपको रुखबाट छतमा चढे। छतमा रहेको झ्यालको जाली काटेर भित्र छिरे। तर, तल झर्ने कोठा बन्द थियो। त्यसपछि डोरीको सहायताले उनीहरुले छतबाट तल्लो झ्यालसम्म पुगेर भित्र प्रवेश गरेका हुन सक्छन्। हत्यापछि छतको ढोका नै खोलेर आँपको रुख हुँदै उनीहरु बाहिरिएको प्रहरी आशंका छ।
२. अचम्मको हत्या
हत्यामा संलग्न व्यक्तिहरुले झाको घरबाट केही नलिई गएका छन्। जसले हत्याकै लागि उनीहरु गएको जस्तो पनि देखिन्छ।
तर, हत्या गर्नेहरुले उनकै घरको किचनको चक्कु प्रयोग गरेका छन्। हत्या किनै क्रूर प्रकृतिको छ। घाँटी तथा टाउकोमा जोडले चक्कुले हानेका छन् उनीहरुले। सुतिरहेकै अवस्थामा झाको हत्या भएको देखिन्छ।
३. कुकुर किन चुप ?
झा कुकुरलाई निकै माया गर्दथे। सधैं आफ्नै कोठामा सुताउँथे। त्यही कारण उनको कोठाको ढोका सधैं खुल्ला हुन्थ्यो। तर, मध्यरात कसैले हत्या गर्दा पनि कुकुरले कुनै प्रतिक्रिया नदिए जस्तो देखिन्छ। त्यसले अर्को रहस्य थपिदिएको छ।
४. प्रमाण गुमनाम
झ्यालमा रहेको किताबमा समेत रगत पुग्ने गरी झामाथि चक्कु प्रहार भएको छ। तर, घटनास्थलभन्दा बाहिर भने रगतको कतै प्रमाण भेटिन्न। जसले गर्दा पेसेवर अपराधीले नै हत्या गरेको प्रहरी आशंका छ।
घरको बगैंचामा दुई वटा पञ्जा भेटिएका छन्। हत्यामा प्रयोग भएको आशंकामा प्रहरीले त्यसलाई बरामद गरेको छ। तर, घरमा अरु पञ्जा पनि त्यस्तै भएकाले घरमै भएको आशंका छ।
Two informations are not clear. No one. Does Jha spouse not sleep inasingle room?. Most often old spouse lives inasingle room bed may be separate. No. two- what is the tantative time of incident? Night, evening, morning etc. No.4-What does the call detail of member three person at home say?. Some indications may find. No. 5. Criminal might have entered into compound in day and evening and have been secret some somewhere in big compound. Not barking, dog, remaining door open, spouse living in separate room (if true), recent selling of property, not socialising habbit (may be initial stage depression suddenly saturated) are the grounds from which one can probe into the heinous crime. Make sureafallen apple on the ground does not go one kilometer away.
ghatna akdam rahasyemaye nai raixa...mero aafno mulyankan anusahar hatya ghar bhitrai ko le garyo ki bhnne bhayo..teti maya garne kukur pni nabhuknu ko karan k ta akhir tyo kukur le pni tyo hatyaralai pakkai chineko bhayerai hola nabhukeko..
श्रीमती र आफन्तकै मिलेमतो मा पेशेवर हत्याराको समलंग्न हुन सक्छ ।
Bhanepaxi ghatanako awastha ra ghar paluwakukur chup lagi baseko bhanepaxi kukur sang parichit byekti arthat parbar kai sadasya hatyara hunuparxa
उहाँकाे श्रीमती तथा कुकुरले थाहा नपाउनु भनेकाे सुघाउने ग्यास सुघाएर लठ बनाए जसले गर्दा कसैले थाहा पाउन सकेन । यसमा बाहिर र पहिचानवालाकाे हात रहनु पर्छ । सचेतनाााा साथ कार्वाहि अघि बढाेस
घर भित्र रहेका नोकरलाई सरकारि नोकरी पैसा या उनिहरुका अाास्यकता पूरा गर्ने नीति अपनाय सबेै पोल खुल्छ बाहिरको भय कुकुर भुु्क्त्यो नि
Mitra kumar Rai
चक्कुको finger print चेक्क गर्ने । पन्जा जहाच गरने ।। घर वरि परि केही खनेको डोप हुनु सकछ ।। धर परिवर सबको कपडा check garney Our prayers for his departed soul.